Oromo Free Speech: SEENAA SOCHII QEERROO FI QABSOO OROMOO
Ilmaan Oromoo bara sana Sochii karaa addaa addaatiin biyya keeysatti gaggeeysaa turan booda, ilmaan Oromoo yeroo san, sabboonummaan itti dhaga’amu, gara biyyoota ollaa akka Somaaliyaatti bahan. Biyya Somaaliyaa irraa gara biyyoota baha jiddu galeeysaa keeysatti wal-gurmeessuun sochiilee tokko tokko jalqabaniiti turan. Tattaaffiin isaan taasisaniis akkaataa itti ijaaramanii maqaa dhaaba siyaasaa tokko tolfatanii Adunyaaf labsan irratti marihataa turan. Dhaaba siyaasaa tokko maqaa isaa moggaasanii labsuurratti falmiitu isaan jidduu ture. Falmiin tuniis yeroo san keeysa mootummaan Somaalee lafa Oromoo qabatuuf jecha maqaa dhaaba siyaayaa WSLF (Adda bilisummaa Somaalee dhihaa) kan jedhamu isaaniif tolchitee turte. Akka kanaan maqaa dhaaba siyaasaa tokko tolfatanii ummatatti bahuurratti, dargaggoonni ykn Qeerroon Oromoo yeroo san waliif galuu hin dandeenye ture.rakkoon isaan gidduutti dhalattee maqaa maaliin akka socha’uu qaban irratti ture.
Maqaa Oromootiin ijaaramuurratti eega harki irra caalu walhubatee booda mootummoota adda addaa dubbisanii gargaarsa akka Dookmeentii ittiin sochoo’an arkachuu, wajjira banachuu, leenjii waraanaatii fi meeshaa lolaa argatuurratti saganteeffatanii hojjachaa turan. Sagantaan hujii kan duraa akkataa dargaggoota biyyouu gala bahaa geeysanii itti leenjifatanirratti hojjachuu. Dargagoota Somlaaiyaa naannoo Maqdashoorraa magaalaa Hargeeysaa fidanii nama xiqqo xiqqoon gara Yemanitti dabarfachaa turan. Hujii dargaggoota yk Qeerroo Oromoo dafanii carraa argametti dhimma bahuuf biyya Somaaliyaarraa gara Adanitti dabarsuurratti hojjatame cimaa ture. Hujii tana keessatti qoodni Obbo Elemoo Qilxuu, Obbo Huseen Suraa, Obbo Mahammad Umar, Injiinar Abdullaahii Luungoo fi Obbo Mul’is Gadaa ( Aadam Tukkaalee) warri keeysa beeku akka himanitti guddaa ture jedhan.